Petr Cech Oo Ka Shaqaynaya In Uu Chelsea U Sameeyo Saxiixii Sagaalaad Ee Xagaagan
Sunday September 06, 2020 - 21:31:06 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Kooxda Chelsea ayaa xagaagan ka yaabsanaysa kooxaha waa wayn ee Premier League kadib markii uu mulkiilaha
Blues ee Ramon Abramovic sameeyay saxiixyo tiro badan oo ku kacaya lacag ka badan 230 milyan gini.
Laakiin Frank Lampard ayaa wali taageero maaliyadeed ka helaya mulkiilaha kooxdiisa ee Ramon Abramovic kaas oo doonaya in uu sii socdo dib u dhiska Stamford Bridge si ay xili ciyaareedka cusub ugu tartamaan koobabka muhiimka ah.
Goolhayihii hore ee kooxda Chelsea ee Petr Cech oo hadda ka mid ah ragga ugu cad cad ee shaqada suuqa kala iibsiga u qaabilsan Frank Lampard ayaa ka shaqaynaya sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa saxiixii sagaalaad ee xagaagan ay Blues samaynayso. Chelsea waxay wali dareemaysaa in booska goolhayaha kooxdeeda kowaad uu yahay halka ay ugu nugul yihiin ee dhibaato wayn kaga noqon karta dib u dhiska ay sameeyeen, wuxuuna Lampard doonayaa in uu helo badalka Kepa.
Goolhaye Kepa oo ah goolhayaha taariikhda kubbada cagta aduunka ugu qaalisan ayaa ku fashilmay in uu u cudur daaro lacagtii 72 ka milyan gini ahayd ee ay Chelsea ka soo bixisay wuxuuna lumiyay kalsoonidii jamaahiirta Blues iyo Lampard.
Lampard ayaa markii uu ka quustay Kepa waxay dantu ku qasabtay in uu Willy Caballero shaxdiisa ku soo bilaabo waxaana jiray goolhayayaal badan oo ay Blues lala xidhiidhinayay waxaana ka mid ahaa Jan Oblak oo ay Atletico Madrid ku dalabtay 108 milyan si la mid ah Andre Onana iyo Nick Pope.
Laakiin wargayska Daily Express ayaa shaaciyay in Petr Cech uu todobaadkan ka hawl galayo isla markaana uu isku dayi doono in uu saxiixii sagaalaad ee Chelsea ee xagaagan ka dhigo goolhayaha kooxda Rennes ee Edouard Mendy.
Edouard Mendy ayaa amaan badan soo helay tan iyo markii uu kooxdiisa Rennes ku soo biiray sanadkii 2018 kii wuxuuna kula soo guulaystay horyaalka League 2 waxaana goolhaye Edouard Mendy lagu qiimaynayaa 18 milyan gini oo kaliya.
Chelsea waxay xagaagan la soo saxiixatay oo kooxdeeda soo gaadhay siddeed ciyaartoy inkasta oo lix ka mid ahi yihiin kuwo muhiim ah oo shaxda Frank Lampard si toos ah ugu tartami doona.
Petr Cech oo laba sanadood ku soo qaatay kooxda Rennes ayaa riixaya in ay suurtogal noqoto in uu dhamaystiro heshiiska goolhaye Edouard Mendy si uu u xaliyo dhibaatada goolhaye ee kooxdiisa Blues.
Saxiixyada ay ilaa hadda Chelsea samaysay waxay kala yihiin Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech,Ben Chilwell, Thiago Silva,Xavier Mbuyamba, Malang Sarr iyo Teddy Sharman-Lowe.